Ity ny fampahalalana rehetra fantatsika momba ny Huawei P9 | Vaovao momba ny gadget
Amin'ny 6 aprily, Huawei dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny sainam-pireneny vaovao, ny Huawei P9, izay hamita ny fianakavian'ny smartphone lehibe ananan'ny mpanamboatra sinoa eny an-tsena ary mandrafitra, ohatra, ny Mate 8 na ny Mate S. Zavatra lehibe andrasana amin'ity fitaovana finday vaovao ity ary na dia afaka mahita aza isika ary hianatra momba azy io ao anatin'ny ora vitsivitsy, nanapa-kevitra izahay fa hanao fanadihadiana lalina momba ny vaovao rehetra fantatray momba ity terminal vaovao ity.
Ny Huawei P8 dia dingana mialoha an'i Huawei izay nahalala ny fomba handresena ny tsena miaraka amin'ny kinova roa amin'ny sainam-pireneny izay nahazo hevitra tena tsara ary ambonin'ny tarehimarika rehetra mahavariana. Ankehitriny ny mpanamboatra sinoa dia mitady hamerina ny fahombiazany ary hanao izany amin'ny alàlan'ny fampidirana fanatsarana lehibe ary hitondrana kinova efatra samihafa an'ny P9 eny an-tsena.
1 Volavola; ny fahamendrehana dia mbola eo
2 Fampisehoana sy tsipiriany amin'ireo kinova samihafa an'ny Huawei P9
3 Efijery; karazany mba hahafahantsika misafidy
Volavola; ny fahamendrehana dia mbola eo
Ny ankamaroan'ny fitaovan'ny finday Huawei dia manana famolavolana faran'izay mitandrina izay manome endrika kanto tokoa. Ny Huawei P8 dia nanana famolavolana tamin'ny famaranana metaly tamin'ny endriny rehetra ary noho ny fivoahana vokariny dia afaka nanamarina izahay fa Ity Huawei P9 ity dia hanaraka ny tsipika famolavolana nentin-drazana ny mpanamboatra sinoa.
Araka ny hitanao amin'ny sary asehonay anao eto ambany, ity terminal Huawei vaovao ity dia manana fitoviana lehibe amin'ny Nexus 6P, novokarin'ny mpanamboatra sinoa. Noho ny fivoahana dia tsy azo atao koa ny mahita ny fizarana fakantsary aoriana, izay hitondra ny sonia Leica. Misaotra ireo fivoahana hafa, naseho ihany koa ny scanner-ny rantsantanany, napetraka ao aoriana.
Mba hamaranana ny ampahany amin'ny endrika dia tsy maintsy asehonay anao ny sarin'ny Filohan'ny Huawei, Ren Zhengfei, izay tratra niresaka tamin'ny telefaona niaraka tamin'ny Huawei P9. Io dia nahafahanay nanamafy ny ahiahy maro izay efa nanananay toy ny fakantsary roa na ny famolavolana metaly. Mazava ho azy, angamba misy tokony hanazava amin'ny filoham-pirenen'ilay mpanamboatra sinoa, fa mila mitandrina kely kokoa ianao amin'izay zavatra raisinao amin'ny birao ary indrindra amin'ny toerana ampianaranao azy.
Mety tsy ho very io Huawei P9 vaovao io ihany koa, ny seranan-tsambo USB karazana C vaovao, izay ho hitantsika eo amin'ny farany ambany amin'ny terminal miaraka amin'ny mpandahateny sy ny jack headphone.
Fampisehoana sy tsipiriany amin'ireo kinova samihafa an'ny Huawei P9
Ato ambany dia asehonay anao ny toetra sy ny masontsivana isaky ny kinova Huawei P9 izay hamely ny tsena. Amin'izao fotoana izao ary mazava ho azy fa tsy voamarina amin'ny fomba ofisialy ity fampahalalana ity.
Pikantsary: ​​5.2 santimetatra miaraka amina vahaolana feno HD 1.920 x 1080 teboka
Mpandrindra: Hilisilicon Kirin 950 octa-core
Fahatsiarovana RAM: 3GB
Tahiry anatiny: 32GB
Fakan-tsary: ​​sensor 12 megapixel miaraka amin'ny stabilizer optika ary fifantohana laser
Fifandraisana: Global 4G FDD-LTE
Vidiny: $ 499
Rafitra fiasa Android 6.0 miaraka amin'ny soso-kevitr'i Huawei manokana
Mpandrindra: Hilisilicon Kirin 955 octa-core
Tahiry anatiny: 64GB
Vidiny: $ 599
Pikantsary: ​​6.2 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana Q QHD
Vidiny: $ 699
Screen: 5 santimetatra miaraka amina vahaolana feno HD 1.920 1080 x XNUMX teboka
Processeur: Qualcomm Snapdragon 650
Tahiry anatiny: 16GB
Vidiny: $ 299
Efijery; karazany mba hahafahantsika misafidy
Ny efijery an'ny Huawei P9 vaovao dia ho iray amin'ireo teboka matanjaka amin'ny sainam-be Huawei ary miankina amin'ny kinovan'ny fitaovana nofidintsika dia hahita habe iray na hafa isika. Ao amin'ny kinova, andao antsointsika hoe ara-dalàna, dia hahita efijery 5,2-inch miaraka amina vahaolana feno HD isika.
Ny famaha ny efijery amin'ity dia ity dia ho avo kokoa noho izay hitantsika tany amin'ireo fantsona hafa an'ny orinasa, ary amin'izany manaraka ny làlana natomboka tamin'ny Nexus 6P izay novokariny ho an'i Google.
Noho ny fivoahana iray izay efa nanana toerana tao amin'ny tambajotra sosialy sinoa Weibo, afaka nahafantatra izany izahay Ny Huawei P9 vaovao dia hametraka processeur Kirin 950, miaraka amin'ny RAM 3GB ary izany dia nanipy tarehimarika 96.043 tao amin'ny sehatra benchmark AnTuTu, manimba ireo fambara fa hiatrika terminal iray tena matanjaka isika.
Mazava ho azy fa toa izany ary ankoatry ny tsy nampoizina tamin'ny minitra farany, ity Huawei P9 ity dia hijanona eo ambanin'ny Samsung Galaxy S7 na LG G5, roa amin'ireo terminal famaritana ny faran'ny haavo ambony ankehitriny.
Huawei dia tsy te ho tavela raha oharina amin'ireo mpanamboatra hafa izay nanapa-kevitra ny hampiditra fihatsarana lehibe amin'ny fakantsary misy ny fitaovany ary nanapa-kevitra ny hanavao miaraka fakan-tsary roa miaraka amin'ny laser autofocus. Efa hitanay sahady io fanavaozana io tao amin'ny Nexus 6X, izay manolotra antsika ny fahazoana sary avo lenta.
Raha ny momba ny fakantsary fakan-tsary dia antenaina hitranga izany 16 megapixels ao amin'ny fakantsary lehibe, miaraka amin'ny stabilizer sary optika sy 8 megapixels amin'ny faharoa.
Ny fakan-tsarin'ny terminal Huawei dia nivoatra be tokoa ary hatramin'ny nanoloran'ny mpanamboatra sinoa ny Huawei Ascend P6 any Barcelona dia tena zava-dehibe ny fanatsarana sy ny tombony amin'ny kalitao. Enga anie ka tsy handiso fanantenana antsika ity Huawei P9 ity ary hamarana ny fiakaran'ny vidin'ny fakantsary an'ny mpanamboatra sinoa.
Amin'izao fotoana izao dia fantatsika amin'ny fomba ofisialy fa izany Ny Huawei P9 vaovao dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 6 aprily ary izany, toy ny nitranga tamin'ny tranga hafa, mety hahatratra ny tsena izany andro vitsivitsy taty aoriana, na dia mampidi-doza aza ny sahy manamarina ny daty hahatongavan'ny tsena.
Efa nodinihintsika teo aloha ny vidiny ary ho an'ilay maodely vita batemy nataontsika toy ny mahazatra, ny vidiny dia 499 dôlara, izay heverinay fa mitovy na kely aza no adika amin'ny euro, na dia hojerentsika izany amin'ny Alarobia ho avy izao rehefa manao ny Huawei Huawei P9 ofisialy.
Inona no andrasanao ary inona no hevitrao momba izay fantatsika momba ny Huawei P9 vaovao hatreto?. Lazao aminay ao amin'ny habakabaka voatokana ho an'ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity na amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy misy anay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ity ny fampahalalana rehetra fantatsika momba ny Huawei P9
YouTube Red, safidy mahaliana ho an'ireo tia YouTube rehetra